GAROWE, Puntland- Madaxweynihii hore Puntland hadana ah Xildhibaan katirsan Aqalka Sare Barlamanka Somalia, ayaa maanta soo gaaray magaalo Madaxda Puntland ee Garowe kadib safar uu kaga yimid magaalada Muqdishu.
"Waxaan ka digayaa in farogalin lagu sameeyo qorshayaasha Madaxweynaha cusub gaar ahaan xukuumadda uu soo dhisi doono, waxaana madashii fashilantay iyo waxa ay wateen ugu baaqay inuu ninkaas ka ammaan helo oo faraha looga qaado arrimahiisa,"Ayuu yiri mudane Farole.
"Warar waan maq-maqlayay, waxaanse idiin sheegayaa inaan aniga la igu mashquulin, cidna xumaan uma wado xumaanna waligay kama shaqayn wanaag farid ma ahane," Sidaas ayuu kusii daray hadalkiisa.
"Warkaas waxba kama jiraan, ciddii sheegtayna waad cid baqdin qabta, waxaase la idin ka rabaa inaad idinku weydiisaan oo la xisaabtamaan Xildhibaanadii doortay," Sidaas waxaa warkiisa ku daray Cabdiraxmaan Farole.
Murashax Farole oo tanaasulay iyo eedayn uu jeediyay [Daawo]
MUQDISHU, Somalia- Murashax Madaxweynaha Somalia Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamud Farole, ayaa maanta ku dhawaaqay inuu tanaasulay kadib xilli uu warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdishu caasumadda dalka.
Farole ayaa tanaasulkiisa u sababeeyay arrimo ay kam ...
Madaxweyne Farmaajo oo gaarey Baydhabo
​Somalia: Madaxweynaha cusub oo shacabka la hadlay
Senator Farole oo Barlamanka ugu baaqay inay ansixiyaan Wasiirrada Somalia [Dhagayso]